#$% လိုလိုမှိုလိုလို #$%လားမှိုလား #$% ဖြစ်နေတာလား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » #$% လိုလိုမှိုလိုလို #$%လားမှိုလား #$% ဖြစ်နေတာလား ?
#$% လိုလိုမှိုလိုလို #$%လားမှိုလား #$% ဖြစ်နေတာလား ?
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Jun 14, 2012 in Complaint / Claim, Think Tank | 42 comments
ခင်ဗျားတို့ စောက်သုံးမကျတဲ့အတွေးတွေကို ကျုပ်ပြောတာ ဖတ်ပြီးမှဆက်ပြောပါ
ကဲ ကျုပ်ပြောထားတဲ့ လင့်မှာ သူက သူသိတာကို သူပြောထားတာ ခင်ဗျားတို့က ဘာဖြစ်နေတာလဲ ?????
နိုင်ငံသားဖြစ်၏ မဖြစ်၏ ဆိုတာက ဘာကို တိုင်တည်ပြီးပြောနေကြတာလည်း
ပြဿနာက ဒေါ်ခင်မမမျိုး ဆိုတဲ့ အဖွားကြီးတစ်ယောက် ရေးထားတာကို ခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြီးဘီလား ကျုပ်လိုက်ဆာတာ မတွေ့လို့ သဂျီးကူညီဘာ
ကျုပ် စက်ဂ ဗိုင်းရပ်ထိသွားလို့ ဒေတာတွေပျက်သွားလို့ မဟုတ်လို့ကတော့ ခင်ဗျားတို့နာဘီသာမှတ်
အမငီး.. ဆြာပုတစ်ယောက် ရခိုင်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မှာတော်တော် ပေါက်ကွဲနေပုံရဒလယ်… ဖြေးဖြေးရေး ဆြာသမားရေ..
ကြမ်းသင့်ရင်တော့ ပစ်သာကြမ်းပေးပလိုက်တော့… ကြာနို့….
စောင့်ဖတ်နေတယ်… ခေါင်းစဉ်ကြီးက ကြက်သီးထစရာ
ရွာထဲက အပျိုဂျီး၊ ဒွေ ထွက်ပြေးကုန်ဦးမယ်… ဟီးးး
ကျနော် ရေးတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး စောင့်ဖတ်စေလိုပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့စောင့်နေတယ်ခင်ဗျ…. မြန်မြန်သာ စိတ်အေးအေးထားရေး ဒီကစောင့်နေသူ… ၀င်မန်.မလို.. ပွိုင့်လေးတွေက လဲ နှမျောသေးတယ်လေ……. ဟိဟိဟိ
ကျွန်မ တကယ်စောင့်နေပါတယ် ဆြာပု။ ဒီဆိုက်ထဲမှာ ဆြာပုနဲ့ ကိုကြီးကြောင်ရဲ့စာတွေ ကို ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိ အလေးအနက်ဖြစ်ပါတယ်။
မန်မိုရီစတစ်တွေနဲ့ ဒေါကြီးမောကြီး နဲ့ လာကူးသွားကြတယ်
နောက်နေ့ မြန်မာလဲ ခံရရော အထီးအမ တစ်ကောင်မှ လာမကြည့်ကြဘူး
ရိုဟင်ဂျာ ကို အဓိက ဆပလိုင်းနေတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ
ဆြာပုရေ စောင့်နေတယ်နော် ဘာတွေရေးမှာလဲ ဘာတွေပြောမှာလဲလို့…….
– kai |951- Hits|
Posted by kai on Aug 17, 2011 in Know-How, DIY, Think Tank | 20 comments
အဘပု က ဒီလို ချစ်စရာ ကလေးလေး ဖြစ်နေမယ် ဆိုတာ တစ်ခါမှ ကို မတွေးခဲ့ဖူးဘူး။
ဒီလူကြီး အိုလှပြီ ဖြစ်မှာလို့ ထင်ခဲ့မိတဲ့ အသုံးမကျတဲ့အတွေး။
တုံး လိုက်တဲ့ ငါဟဲ့။
စကားမစပ် တစပ် ဒီကလေးက ဘယ်သူတုံးဗျ…
ရေးလဲရေး ဒေါသလဲထိမ်းပါ ကိုအောင်ပုရယ်…
ဂျော်နီအဘပု ရေးမယ့်ဟာ စောင့်ဖတ်မယ်နော်
မယဉ်ကျေးသော အသုံးနှုံးများတွက် ဦးစွာပထမ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကျနော်ဒေါသထွက်နေသည်ဟု ထင်သူများ မှားလေ၏ဟု ဆိုခြင်ပါသည်
ကျနော်ဘာမှမဖြစ်ပါ ကျနော် မယဉ်ကျေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်
မနေ့ကသောက်သောအရက် ( ဝီစကီ ) သည် အလွန်စစ်လေ၏ ( ဤကားသစ္စာစကားတည်း )
ကျနော် မန်းဂေဇက်ကို စတင်ဖတ်ရှု့မိခြင်းသည် ကျနော့တွက် အလွန်အကျိုးကျေးဇူးကြေီးလေသည်ဟု
လွန်ခဲ့သော ဘယ်နှစ်နှစ်ကလည်းမပြောတတ် ခေတ်ပြိုင် ( ယ္ခုမရှိတော့ပြီ ) ဟူသော
ဆိုဒ်မှ လိပ်စာရပြီး ဤ ( မန်းဂေဇက် ) ကို ဟိုကလိဒီကလိ ဖတ်ရှု့မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မှတ်မှတ်ရရ ပြောရသော် ဗမာတစ်ယောက်နိုဗယ်ဆု ရတော့မည် ဟူသော ပို့စ်ဖြစ်ပါသည်
( ဆက်ရေးပါမည် )
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သမိုင်းဆိုတာကို ပြောရမှာပါဘဲ
ကျနောဟာ အရပ်စကားနှင့်ပြောရလျှင်တော့ တိုင်းရင်းသားကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်
နည်းနည်းလေး လူအထင်ကြီးအောင်ပြောရသော် မျိုးမစစ်သူတစ်ယောက်တည်း
ကျနော့်အဘရွာကိုသွားလည်း အဘရဲ့ တိုင်းရင်းသားစကားကိုမပြောတတ်
ကျနော့အဖွားကြီး ( ကျနော့်အဘရဲ့မိန်းမ ကျနော့အမေ ) ရွာကိုသွားလည်း ကျနော့ အဖွားကြီး
တိုင်းရင်းသားစကားကိုမပြောတတ် ( ကျနော့အဖွားကြီးရဲ့ အမျိုး ) တွေ ပိုဆိုးပါသည်
ဗမာကလေး ဒို့စကားကိုမပြောတတ်ရင် ဒို့ဆီမလာနဲ့ ဟုပင်အပြောခံရဘူးပါသည်
ဤကား ကျနော်၏ လူမျိုးရေး နာကျဉ်းချက်တစ်ခုဖြစ်လေတော့၏
( ထိုအချိန်တွင် ကျနော်၏ အသက်သည် ဆယ့်သုံးနှစ်ခန့်ရှိမည်ဟု ထင်မှတ်မိပါတော့သည် )
( ဆက်ရေးပါဦးမည် )
ခင်ဗျားတို့ ဆဲတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆဲဗျာ.
ကျုပ်ဘကြီး ကိုမှိုကြီး နာမည်တော့ မထည့်နဲ့ 
သူ့ ဘာသာ မှိုက်စိုက်ပြီး ဟယ်လီကော်ပတာ မောင်းနေတာ….အနှောင့်အယှက်မပေးကြပါနဲ့ 
တခါတလေ စာတွေကို ဘယ်လို ရေးလို့ ဘယ်လို့ မမြင်တတ်တာလဲ ဆိုတာ အနော်တို့ကို သိသာစေပါတယ်။
တချို့တွေ ကိုယ်ပေးသလောက် ပြန်မရသလို
တချို့တွေ ဘာမှမပေးဘဲ အများကြီး ရသွားတတ်ပါတယ်…..
သြော် အနိစ္စ….. စမူလူ…စမူလူ(စနစ်+မူ+လူ)
ကျနော့အဘနှင့် ကျနော့ အဘ၏ မိန်းမ ( ကျနော့မိဘတွေပေါ့ဗျာ ) သည် သူလိုကိုယ်လို
ကျနော့အဖွားကြီးက ကျောင်းဘယ်နှစ်တန်းမသိသော်လည်း ကျနော့အဖွားကြီး၏လင် ( ကျနော့အဘ ) မှာမူကား
အထောက်ထားပြရသော် သူ့နာမည်ကိုပင်ေ၇းတတ်သည်ဆိုရုံလေးဖြစ်၏ သည်သာလျှင်တည်း
သို့သော် ထိုနေရာတွင် မိဘတို့၏ သဘောသဘာဝလားမပြောတတ် ထိုအဖိုးကြီးနှင့် အဖွားကြီးသည်
ဇော်ဂျီ တည်းဟူသော ကျနော့အား မရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးဖြင့် စာတတ်အောင်အောင်ကျောင်းထားသည့်အခိုက်
လူလိမ္မာလေး ကျနော် မောင်ဇော်ဂျီသည် အနှီးအဖိုးကြီးနှင့် အဖွားကြီးတို့၏ လက်ရင်းလက်ငုတ်
စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရှိသမျှတို့ကို တစ်ပြားမှ မကျန်အောင် ဖြုံးတီးလေတော့သတည်း။
( ဆက်ပါဦးမည် ) ( ဘယ်လိုမှတော့ သဘောမထားကြပါနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ရေးနေရတာပါ )
ဘယ်သူနဲ့မှကို လုံးဝမတူပါဘူး ကိုအောင်ပု…
ကျုပ်လဲ ခင်ဗျားရေးပုံကို အတုယူဦးမယ်…
ခဏစောင့်ကြည့်ပြီးမှ အတုယူရင်ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားမယ်…..
( လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် )
ဒါ့ကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကြောင်းများကို မပြောတော့ပါဘူး
( ဒီလောကထဲ ကျနော့ကို အထင်ကြီးသူဆိုတာ ကျနော်တောင်မပါဘူးလားမပြောတတ် )
ကျနော့်ဘဝတွင် အချို့အချိန်များသည် အလွန်အလုပ်ရှုပ်တတ်ပါသည်
ဥပမာတစ်ခု ( တစ်ခုဖြင့်ကျေနပ်ကြစေလိုပါသည် ) ပေးရသော်
ရွာဘုရားပွဲဖြစ်သောအခါ ကျနော် အလွန်အလုပ်ရှုပ်ပါသည်
ကျနော်၏အလုပ်မှာ စပါးကျီကို စောင့်ကြည့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အနှီးစပါးကျီကြီးကို ကျနော်
အက်ချူးယဲ့လီ ကျနော်စောင့်ကြည့်သည်မှာ ကျနော်၏ အဘဖြစ်ပါသည်
အဖိုးကြီးလစ်သည်နှင့် စပါးကျီထဲမှ စပါးများကို ယူဆောင် ( ယဉ်ကျေးမှု့အရ ခိုးယူသည်ဟု မသုံးနှုံးပါ ) ပြီး
အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်မလွယ်ပါ အကြောင်းမှာ
ကျနော်၏ ဘစ်ဇနစ်ကို ကြီးစွာ အဟန့်တားပြုသူမှာ ကျနော်၏ ဘကြီး ( ပျံလွန်တော်မူ ) ပင်ဖြစ်လေတော့သည်
ကျနော်ရောင်းသော စပါးကို ဘကြီးအားအကြောင်းပြု၍ မည်သူမျှမဝယ်ကြပါ
ထိုအချိန်တွင် ကျနော် မည်သို့ ခံစားနေရသည်ကို ကိုယ်ခြင်းစာပေးကြစေလိုပါသည်
အထက်မှာကျနော်ဆိုခဲ့ပြီးသလို ကျနော့်အဘနဲ့ သူ့မိန်းမက လူမျိုးမတူဘဲယူကြတော့
ကြားထဲက ကျနော်က အမျိုးမစစ်တဲ့သတ္တဝါဗလိုင်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါဘဲ
ဒါ့ကြောင့်ရံခါ ကျနော် အဖိုးကြီးကိုတစ်မျိုး အဖွားကြီးကိုတစ်ဖုံ ကလဖန်ထိုးတတ်ပါတယ်
ယူစရာလင်မရှိတော့ဘူးလား အဘကိုမှယူရသလားဗျ ကိုယ်နဲ့လူမျိုးမတူတာကိုယူတော့
ဒီက ဘလိုင်းကြီး ဘာမျိုးဖြစ်သွားဘီလဲဆိုတာ ကိုယ်ခြင်းစာကြည့်ပါဦးလို့
အဖွားကြီးကို ပြဿနာလုပ်လေ့ရှိပါတယ် အဲ့လိုပြောလိုက်ရင် ဟယ်…ဇော်ဂျီ နင်တော့ မိုးကြိုးပြစ်တော့မှာဘဲ
အဘကလည်းဗျာ ကိုယ့်ရွာကမိန်းမကိုမယူဘဲနဲ့ လူမျိုးမတူတဲ့ အဖွားကြီးကိုယူတော့
ကျနော်က ဘာလူမျိုးမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး လို့ပြောလိုက်မိရင်
ဒီလိုမှန်းသိရင် မင်းကိုငါမမွေးပါဘူးကွာ အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ မင်းကိုလည်းလာပါလို့တစ်ခါမှ
ငါစိတ်မကူးမိပါဘူး ငါတို့ဖာသာ အပျော်လုပ်ကြတာ မင်းဘာသာရောက်လာတာ လို့ဆိုပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူလို့ဘဲသဘောထားစမ်းပါကွာ ဟုသာ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ကျနော် မိဖတို့ကိုပြန်ပြောရလောက်အောင် ကျနော့ဆီမှာ ခံစားချက်ချက်တွေရှိပါတယ် ဒါက
လူကောင်လေးကြီးပြီး လူလိုနည်းနည်းသိတတ်လာမှ ခံစားချက်လို့နာမည်တတ်နိုင်တာပါ
အဲ့သည်အချိန်တုန်းက ကျနော့်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်မပြောတတ်ပါဘူး သေခြာတာကတော့
ကျနော် မကြေနပ်ပါ ဘာကိုမကျေနပ်သည်မသိ။
ကျနော့်အဘဟာ ကရင်နဲ့ ကရင်အကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ ကရင်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါကညောစစ်စစ်ပါ
ကျနော့်အဖွားကြီးဟာဆိုရင်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ ရေမရောတဲ့မွန်စစ်စစ်တစ်ယောက်ပါ။
ဝိသေသလေးတတ်ပေးရရင်တော့ သူတို့နှစ်ဖက်စလုံး ( အဖိုးကြီးနဲ့ အဖွားကြီး ) ရဲ့ အမျိုးတွေထဲမှာ မျိုးမစစ်သူဆိုတာ
တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ ကျနော်တစ်ကောင်တည်းသာ မျိုးပျက်နေခဲ့ရတာပါ။
( အနှီး အဲ့သည်အဖိုးကြီးနဲ့ အဖွားကြီးတို့ရဲ့ လူမျိုးမတူလို့ ယူကြပြီးဆွေပြတ်မျိုးပြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဇာတ်ထုတ်လေးကို
ဆာဗာကြီးအား အားနာသဖြင့် ချန်ထားခဲ့ပါမည် )
စာရင်းချုပ်သော် ကျနော်သည် ကရင်တစ်ယောက်နှင့် မွန်တစ်ယောက်တို့၏ ဘာညာကွိကွ ကိလေသာထကြရာမှ
ဗမာရွာတွင်ကြီးပျင်းလာသော ကရင်မဟုတ် မွန်မဟုတ် မျိုးမစစ်တစ်ယောက်သည်သာလျှင်။
မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ မျိုးမစစ်သူဟု ပြောနိုင်ရန် ကျနော် အချိန်တွေအများကြီးရယူခဲ့ရပါသည်။
ကျနော်လွယ်လွယ်ဘဲတွေးလိုက်ပါတော့သည် အဘစကားလည်းမတတ်ပါ အဖွားကြီးစကားလည်းမတတ်ပါ
ကျနော် ဗမာစကားဘဲပြောတတ်ပါသည်။ ဒီလိုဆိုငါက ဘယ်မျိုးစစ်မလဲ
ကျနော်မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ ထိုသို့ ခံယူနိုင်သောအခါ ဘာမှန်းမသိ ပြုံးပြုံးလေးဖြစ်သွားခဲ့သည်လားမပြောတတ်။
ဒီနေရာမှာ ဆိုခဲ့ပြီးသလို ကျနော့ရဲ့ ခံစားချက်လားဘာလားမပြောတတ်သည့်အကြောင်းအချို့ကို
ပြောပြခြင်ပါသည်။ ထိုသောအကြောင်းတို့သည် ယနေ့တိုင်အောင်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်နေပါလိမ့်မည်။
ရံခါ ကျနော့်အဘရွာကို သွားသောအခါ ကျနော့်ကို ဗယော်ဖိုး ( ဗမာကလေး ) ဟု ခေါ်ကြပါသည်။
ကျနော့်တွင်နာမည်ရှိပါသည်။ ထိုသို့အခေါ်ခံရသောအခါ ကျနော်မကျေနပ်ပါ အမှန် ထိုအချိန်မျိုးတွင်
ကျနော် ဘာဖြစ်သည်မပြောတတ်သော်လည်း မကျေနပ်သည်မှာသေခြာလှပါသည်။
အဖွားကြီးရွာကို သွားလျှင်လည်း same same ပင်။ ကွန်းဟမယ် ( ဗမာကလေး ) ဟုခေါ်ပြီး
အချို့က ကျနော့်ကို ဟမယ် ( ဗမာ ) ဟုခေါ်ကြသောအခါ ထုံးစံအတိုင်း ကျနော် ဂေါက်ထစမြဲပင်။
ဘကြီးက ပျံလွန်တော် မူတယ်ဆိုတော့ ဘကြီးက ဘုန်းကြီးလားဗျ
လူတွေဆိုရင်တော သေတယ်..ဆုံးတယ်..ကွယ်လွန်တယ်..ဂန့် တယ်..ရှောတယ်..စသဖြင့် သုံးကြပါတယ်..
အူးလေးပုက စပါးတွေခိုးရောင်းပြီး ချစ်ချစ်ကို မုန့် ဝယ်ကျွေးတာလား..ဒါမှမဟုတ်..ဘီအီးသောက်တာလား..
“အဘကလည်းဗျာ ကိုယ့်ရွာကမိန်းမကိုမယူဘဲနဲ့ လူမျိုးမတူတဲ့ အဖွားကြီးကိုယူတော့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူလို့ဘဲသဘောထားစမ်းပါကွာ ဟုသာ ပြောလေ့ရှိပါတယ်”
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆက်ရေးပါ .. စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ..
ကိုရီးယားကားလိုပဲ ဆန့်တငန့်ငန့်နဲ့ …..
ခေတ်နဲ့ အညီလိုက်နိုင်ပါပေတယ် မောင်ပုပုရယ်။
ဘဘငယ်ပုပု ဆက်သာလုပ် အဟုတ်တကယ်မျှော်နေမည်
စောင့်နေတယ် ဗျို့.. မြန်မြန် ရှင်းပါဗျို့.. တော်ကြာ တရွာလုံး မီးသင့်လို့ သေကုန်အုန်းမယ်။
ကဲ ကျုပ်ပြောထားတဲ့ လင့်မှာ သူက သူသိတာကို သူပြောထားတာ ခင်ဗျားတို့က ဘာဖြစ်နေတာလဲ ?????
ရေးထုံးသစ်တွေထွင်လိုက်တာ မောင်ဂီတို့စိန်ပေါက်ပေါက်တို့တော့ အရှုံးပေးရတော့မယ်။
အားလုံးပြီးမှ မန့်ရမလား၊ခုပဲ မန့်ရမလား၊
မျိုးမစစ်အခေါ်ခံရတဲ့ မောင်ပု ကနစ်နာ.
ကဲ အဘဟာ အကုန်ရောင်းပြီး စီးပွားရှာလိုက်ပါကွာ။
ဒီနေ့ပဲ..(ဒီနေ့ပဲ) အိုဘားမားက. ယူအက်စ်ထဲခိုးဝင်နေတဲ့.. လူ၈သိန်းကို တရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီ..
Wall Street Journal – ‎22 minutes ago‎
By ANGUS LOTEN Verifying the legal status of new hires isacostly, burdensome distraction, one that’s best left to immigration officials, they have argued.
Related Illegal immigration » Mitt Romney »
Young immigrants hopeful, skeptical of Obama planThe Associated Press
Young illegal immigrants optimistic, skeptical of Obama plan to let them stay …
Obama to Stop Deporting Younger Illegals
The Department of Homeland Security on Friday announced that it will stop deporting children of illegal immigrants who meet certain criteria and are in the country in good standing.
The significant change in immigration policy, effective immediately, applies to people under the age of 30 who came to the U.S. before they turned 16 years old. They must have lived in the United States for five years, have no criminal record, and earnedahigh school diploma, remained in school or served in the military.
The DHS decision, formally announced by President Barack Obama this afternoon, closely reflects the DREAM Act, the controversial measure popular among Hispanics that has been debated in Congress since it was first introduced in 2001 and which died in the Senate last year.
Obama said the new policy affects about 800,000 undocumented immigrants. He said the change in policy providesadegree of relief and hope “to talented, driven, patriotic young people” and makes the nation’s immigration system “more fair, more efficient, and more just.”
“This is not amnesty, this is not immunity,” Obama said in the White House Rose Garden. “This is notapath to citizenship, it’s notapermanent fix.”
The administration’s action would bypass Congress, where the DREAM Act, designed to giveapath to legal status for younger undocumented immigrants, has been stalled. It also pushes the issue back into the spotlight in the election campaign between Obama and Republican Mitt Romney, who has opposed the DREAM Act.
Besides benefitting children of immigrants, the DREAM Act would have allowed some illegal immigrants who came to this country as children to gain legal status. The act has beenahot-button issue during the GOP presidential primaries – and presumptive candidate Mitt Romney has come out against the legislation.
Inarelease issued on Friday from the DHS, those meeting the criteria will be granted the two-year stay under certain conditions. The conditions as laid out in the release:
• Any foreign-born children who came to the U.S. age 16 years or younger and who have continuously resided in the United States for at least five years
• They must not have been convicted ofafelony offense or of multiple misdemeanor offenses or poseathreat to national security
• The policy extends to those in school, or high school graduates, or those withaGED or equivalent, or have been in military service with an honorable discharge
• Cannot be above the age of 30
The statement reads, “DHS cannot provide any assurance that all such requests will be granted.” The release also says that although “this guidance takes effect immediately, USCIS and ICE expect to begin implementation of the application processes within sixty days.”
The “deferred action” also will be extended to those who meet the criteria but are currently in the deportation process.
Secretary of Homeland Security Janet Napolitano, inaconference call, said: “I believe that additional measures are needed to ensure that our enforcement resources are not extended on low priority cases but are instead appropriately focused on people who meet our enforcement priorities.
“Therefore, consistent with our existing use of prosecutorial discretion, today I am announcing that effective immediately young people who were brought to the United States through no fault of their own as children, and who meet several peak criteria, will no longer be removed from the country or entered into removal proceedings.”
The announcement comes as Obama is courting the Hispanic vote as the November presidential election draws near. Many battleground states have burgeoning Hispanic populations — Florida key among them — and Obama has been actively pursuing Hispanic votes in these swing states.
Atacampaign stop in Cleveland on Wednesday, just one day before the announcement, Obama declared: “If we truly want to make this countryadestination for talent and ingenuity to people from all over the world, we won’t deport hard-working responsible young immigrants who have grown up here or received advanced degrees here. We’ll let them earn the chance to become American citizens so they can grow our economy.”
Reaction to the administration’s announcement was split along party lines.
U.S. Rep. Allen West,aFlorida Republican, called it an “overreach” of Obama’s executive powers” and Sen. Lamar Alexander called ita‘breach of faith” against the American people.
Democrats like Sen. Robert Menendez, D-NJ, called itajust move for those who long to make their dreams come true in America, and Sen. Dick Durbin, D-Ill., dubbed ita“historic humanitarian moment.”
As for the DREAM Act –the Development, Relief and Education for Alien Minors Act – it would have provided conditional legal status to qualifying young people who were brought to the United States before they were 16.
They would have six years to either graduate fromacommunity college, complete two years towardabachelor’s degree or higher, serve in the military or receive an honorable discharge.
Applicants also would have had to maintain “good moral character” throughout the period. They also could not have applied for Pell grants but could have sought student loans and work-study.
သဂျီး…နောက်တခါဆို ဒီကစူပါမန်းရိုဟင်ဂျာ တသိန်းလောက်
ရိုဟင်ဂျာ့အဖေလောက်ရှိတဲ့.. မစ်ဒယ်အိစ်.. အီရတ်..အီရန်က.. စူပါ့စူပါဗုံးသမားတွေတောင်.. သန်းချီယူအက်စ်ခေါ်သွင်းထားတာကို..
သူတို့ကပင်လယ်ဖြတ်.. မြန်မာပြည်ဖြတ်.. ထိုင်းနဲ့..မလေးရှားက.. ပြောင်းခိုသူစခန်းရောက်ရင်.. UNHCR အကူအညီနဲ့.. ယူအက်စ်အပါအ၀င်. ဥရောပ..ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေဆီ(မြန်မာအဖြစ်)နဲ့သွားဖို့.. အခွင့်အရေးရတယ်..။
အဲဒါကို.. အသေအလဲမက်မောကြတာပါ..။ ဒါပေမဲ့…
အစောပိုင်းသာ အိုကေတာ.. နောက်ပိုင်းကျ.. ခက်ပြန်ရော..
ထပ်ပြောပြရင်.. အကုန်ပေါ်တော့မယ်.. :?
ဥရောပတိုက်မှာတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဂ သဂျီးအမျိုးတွေကို အလက်ခံကောင်းဒါ ဒုက္ခနဲ့ လှလှ တွေ့နေဂျပီလေ။ အခုမှ လူဝင်မှုကြက်ကြီးရေးကို စီစစ်ရမယ် ဘာညာနဲ့ မျက်လဲဆန်ပြာ ဖြစ်ကုန်ဂျဒယ်။ စလက်ခံစဉ်ကတော့ မျိုးဆက်တဆက် ပြောင်းသွားရင် အသစ်ဝင်လာသူတွေနဲ့ အိမ်ခံလူတွေ ယဉ်ကျေးမှုဂျင်း ယှက်နွယ်ပီး အားလုံးသဟဇာတ ဖြစ်လာမယ် မျှော်လင့်ပီး လုပ်ခဲ့ဂျဒယ်။ စီးပွားရေးကောင်းနေစဉ် ကျွေးမွေးရမှာနဲ့ ပြန်ရလာမဲ့ လုပ်အား ဘဲစားဘဲချေ ဟုတ်သလိုလိုပေါ့။ နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးလည်းကျ၊ အစ္စလမ်မစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒ ကြီးထွားလာ၊ အဆိုးဆုံးက ထင်ထားသလို ပေါင်းစည်းမှု ဖြစ်မလာဘူး။ သီးသန့်အုပ်စု ဖြစ်လာဒယ်၊ အင်အားကြီးလာဒေါ့ အိမ်ရှင်တွေရဲ့ အပြုအမူ အနေအထိုင် ထုံးစံတွေကို ဝေဖန်လာဒယ်။ အိမ်ကြီးထဲမှာ အိမ်လေးဆောက်လာဒယ်ဗျာ။ ခေတ်မှီတဲ့ အတွေးအခေါ် ယဉ်ကျေးမှုခြင်း စင်ပြိုင်ဖြစ်ရင် တော်သေးပေမဲ့ ခေတ်ဟောင်းအတွေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားဂျတော့ (တဖက်ကလည်း အိမ်ရှင်တွေက သိပ်လစ်ဘရယ်ကျဒယ်) မုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လာဒယ်။ နောက်ဆုံး အယ်လ်ကိုင်းဒါးလို အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပေါင်းပီး လှုပ်ရှားလားဒေါ့ လစ်ဘရယ်ဥရောပလည်း မလစ်မရယ်နိုင်ဒေါ့ဘူး။ အမေရိကန်မှာဒေါ့ ရနေသေးဒယ်။ တိုင်းပြည် သယံဇာတ အရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝမှု၊ လူဦးရေ၊ နယ်နမိတ်ထိစပ်မှု စတာတွေနဲ့ အများဂျီးဆိုင်ဒယ်။ ဥရောပဆိုတာ လူဦးရေသိပ်မများ၊ သေးငယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ စုထားတာ။ နောက်ပီးဒေါ့ မွတ်စလင်ကမ္ဘာနဲ့ နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေဒယ်၊ ဥပမာ တူရကီ၊ အဲဒီကမှ အီရန်၊ အရှေ့ဖက်မှာဆို ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်း မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် တို့ရှိဒယ်။ ရလဒ်က တနွယ်ငယ် တစင်ပါဆိုသလို ထိန်းရသိပ်ခက်တယ်။
အမေရိကန်ကြတော့ တိုင်းပြည်ကသိပ်ကြီး၊ လူဦးရေများ၊ ပထဝီနယ်မြေ အနေအထားရလည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနဲ့ ဒေသအတွင်းမှာ မွတ်စလင် နိုင်ငံမရှိဘူး။ လူဦးရေသိပ်များတော့ ဘယ်လောက်အသစ်သွင်းသွင်း ကျန်လူမျိုးများနဲ့ အချိုးချလိုက်ရင် မသိသာဒေါ့ဘူး။ အဲဒီ dilute လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲ လူမျိုးတအုပ်ခြင်းအလိုက် သီးသန့်စီလိုက်ရင် လူဖြူကော့ကေးရှန်းတွေ အများစု ဆက်ဖြစ်နေဒါလေ။ ဖော်မြူလာက လူမည်းနဲ့ စပင်းန်နစ် သိပ်များလာရင် အခြားလူမျိုး တထောင့်တပါးကို ခေါ်သွင်းဒယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရေရောပီး အသက်ဆက်နေဒါ။ နောက်တချက်က အမေရိကန်နိုင်ငံကိုယ်၌က ပြောင်းရွှေ့လာသူများနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်လူမျိုးဆိုဒါ နောက်ပိုင်းမှာ လူဖြူအစစ်ဆိုလည်း အနည်းဆုံးတော့ အဖြူသွေးနှစ်မျိုးသုံးမျိုး ရောထားပီးသွားဘီ၊ လူမျိုးအစုံ ယဉ်ကျေးမှုအစုံဖြစ်တော့ လူနည်းစုအဖို့ သိပ်အထီးမကျန် အားမငယ်ဘူး၊ ဒီတော့ ကျောခြင်းကပ်ထားဖို့ မလိုဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ မျိုးဆက်အသစ်တွေလက်ထက်မှာ ယဉ်ကျေးမှုဂျင်း သွေးဂျင်းနှောကုန်ဒယ်။ ဥရောပကြတော့ အဲလိုဟုတ်ဖူးဗျ.. ကော့ကေးရှန်းလူဖြူသခင်ဂျီးတွေက အများစု၊ ကျန်ပြောင်းရွှေ့လာသူတွေက အနည်းစု သိပ်ထင်ရှားလွန်းဒယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်လည်း ဘယ်သူနဲ့ ပိုတူသလဲ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ…။
အားပေးသွားပါတယ် ဦးကြောင်ကြီးရေ .. အကုန်သာ အမေရိက ပို့လိုက်ကြပါ။
(၁) သံသရာတွင် အဆွေအမျိုး မတော်ဖူးသူ မရှိဟူ၍ ဘုရားရှင်က ဆုံးမ၍ သော်လည်းကောင်း…
ယခု ကိုယ်က မြန်မာဖြစ်နေပေမယ့်…..သေလွန်ပြီးသည့်နောက် အခြားသော အနွယ်ဝင် ဖြစ်နိုင်သည်ကလည်း တစ်ကြောင်း… ကြောင့်…
ခိုးဝင်လာသည်ဖြစ်စေ… အတည်ဝင်လာသည်ဖြစ်စေ…. လူသား ဟုသာ သိရှိလက်ခံပြီး လူသားချင်းစာနာစိတ်ဖြင့် လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
(၂) အသေ၀နာစ ဗာလာနံ…. လူဆိုးလူမိုက်တို့အား မပေါင်းအပ် မသင်းအပ် ဟု ဘုရားရှင်က ဆုံးမ၍ သော်လည်းကောင်း… ခိုးဝင်လာသည်ဖြစ်စေ.. အတည်ဝင်လာသည်ဖြစ်စေ… လူဆိုး….. လူမိုက်ဟုသာ သိရှိလက်ခံပြီး… အဆွေအမျိုးတို့အား စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ကောင်းမြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏ ဟူသော သုံးဆယ်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်တွင် ပါရှိသည်နှင့် အညီ လူသားမျိုးနွယ်တို့အား စောင့်ရှောက်ခြင်း အလို့ငှာ… မဟော်သဓာထုံး နှလုံးမူလျက် ရန်သူကို ရန်သူလို ဆက်ဆံ ရမည်ဖြစ်သည်။
သူထေးကတော့ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်လာလာ ကျွေးထားနိုင်တော့ မွေးစားတာမဆန်းဘူး။
ကျုပ်တို့လို့ ခလေး ဆယ်ယောက်လောက် ထမင်းဝအောင် မနည်းကြိုးစားပြီးကျွေးထားရတဲ့လူအဖို့
နောက်ထပ် ခလေး ကို ထပ်မွေးစားဘို့စာတာကတော့ ခင်ဗျာတို့ဆီရောက်နေတဲ့ အမကြီး မာမာအေးခေါ်
သူဌေးအိမ်တွေက တကယ်တမ်း ကလေးမွေးတဲ့ နှုန်းနဲ့ ဆင်းရဲသားအိမ် ကလေး မွေးတဲ့ နှုန်းလေး ပြန်ချိန်ကြည့်ပါအုန်း။
သူတို့နဲ့ ဘာသာတူတဲ့ အီရန်တို့ အီရတ် တို့ မခေါ်ကြဘူးလား မသိဘူး။
ရေနံတွေ ရောင်းပြီး ချမ်းသာနေကြတာ.. ဒီမှာတောင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကိုတောင် အကျိုးခံစားမှုက အနိုင်နိုင်ရယ်..း(
ဆ ပု စိတ်ထိန်းလေ…
ထိုသူတို့အတွက် တကမ္ဘာလုံးက၀ိုင်းပြီး စဉ်းစားအဖြေထုတ်နေချိန်မှာ
ထိုသူတို့က တကမ္ဘာလုံးမဟုတ်တောင်မှ သူတပါးအတွက်ဘာတွေများ ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ပါသလဲ ???????
အိုဘားမား ဆီကို သွားကြပေတော့
ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ဘယ် ။
ဘကြီးပု ..ဆက်ရန်စောင့်နေပါသည် ။
ဆက်ရန်မှာ ဆက်ရေးသွားသည်ကိုလည်း သတိပြုမိပါသည်။